FCA Binary Option ကိုထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ | binary Options ကိုစည်းမျဉ်းဥပဒေ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
FCA ပစ်မှတ်လန်ဒန်မြို့ရှိ binary option ကိုပွဲစား 20
ဇန်နဝါရီလ 23, 2018
နောက်ဆုံးအင်္ဂါနေ့က FCA 20 binary option ကို၏အမိန့်အပေါ်ရဲကုမ္ပဏီများသည်ချဉ်းကပ်ဘယ်မှာလန်ဒန်, နေရာယူတဲ့စစ်မှန်တဲ့ razzia ဖြစ်သလိုပဲ။ ထို binary options များပွဲစားများဗြိတိန်သားကောင်များ၏ကျော်£ 18 သန်းနှင့်အတူ, လိမ်လည်မှုအပြစ်ရှိပါပြီဟုလျှောက်နေကြသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို 2017 ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပေသည်။
ဒီအင်္ဂါနေ့ကမမျှော်လင့်လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆင်ရေး၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစီးနင်းမှုထွက်သယ်ဆောင်သူအေးဂျင့်များ, သင်တန်း, ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အတွက်ကုမ္ပဏီများမှကိုင်တွယ်နိုင်မှဘဏ္ဍာရေးကျင့်အာဏာပိုင်နှင့် HM အခွန်ဝန်ကြီးဌာန & အကောက်ခွန်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုယင်း၏မျိုးအကြီးဆုံးစစ်ဆင်ရေးတစ်ဦးအဖြစ်ရဲကဖော်ပြထားခဲ့သည်ဖြစ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းခုနှစ်, binary option ကိုပွဲစားများ၏ 20 ရုံးများဇောက်ထိုးလှည့်ခဲ့ကြသည်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုအမျိုးမျိုးကိုပြသအသုံးပွုနိုငျသောအခြားသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များ၏လိမ်လည်လှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုံးဝ binary options များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေကြသည်။ ရဲအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုယခုရက်သတ္တပတ်ရဲ့သံသယရှိသူအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်မသာပေမယ့်နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်။ အဆိုပါအရှုပ်တော်ပုံ ပို. ပင်လေးနက်ဖြစ်ရသောအနည်းဆုံး 700 ဗြိတိန်သားကောင်များ, ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသတင်းပို့သည်။
ဒါဟာကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သင်တန်း, မဟုတျပါဘူး FCAရဲနှင့် တွဲဖက်. , ဘဏ္ဍာရေးသားကောင်များအောင်နေဖြင့်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ကြောင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေနေသည်။ အမှန်စင်စစ် 2012 ကတည်းကဗြိတိသျှအာဏာပိုင်များစုစုပေါင်း 2065 ဘဏ္ဍာရေးသားကောင်များထက်ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ ဤရွေ့ကားလူတစ်ဦးနှုန်း£ 59.4 22 မှပမာဏသည်သောစုစုပေါင်းဦးထက်မနည်း£ 811 သန်းစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ detect ကိစ္စတွင်စုံစမ်းရန်ငှားရမ်းထားဒီကိုသာရေခဲတောင်များ၏အစွန်အဖျားဖြစ်နှင့်မတိုင်မီဖော်ပြခဲ့သည်မစေခြင်းငှါပိုပြီးလုပ်ကြံခြင်းအားယဇျပူဇျောစရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
နိုင်ငံအားလုံးအတွက်, က, သင်သည်တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်တစ်ဦးမျှတသော binary options များအကျိုးဆောင်ဖို့ကိုဖွင့်နိုင်သည်ကိုပြောနေစရာမလိုဘဲတတ်၏။ ဒါကကုမ္ပဏီ binary options များသို့မဟုတ် Forex options များပူဇော်ဖို့လိုင်စင်ရှိရမည်ဆိုလိုသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ထို့နောက်မှန်မှန်ထိုကဲ့သို့သောယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌ဤအဖြစ်လိမ်လည်မှုအဓိကရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက် check လုပ်ထားကြပါတယ်။ သငျသညျသေးနယ်သာလန်နိုင်ငံ binary options များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်သင်အမြဲလုံခြုံပွဲစားများကိုတွေ့လိမ့်မည်ကြောင်းအာမခံနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကိုစမ်းသပ် IQ Option နှင့်အပြုသဘော Option24 ။ ဤရွေ့ကားလိုင်စင်ပွဲစားများလူတိုင်းမြို့တော်နှင့်အတူကုန်သွယ်ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့တရားမျှတတဲ့ထုံးစံ၌ငွေရှာဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, FCA မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေထဲကယူမည်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အပေါငျးတို့သလုံခြုံပွဲစားများတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်မည်!
Tags: ထို binary option ကိုကုန်သွယ်, ဒွိ option ကိုကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, ထို binary options များဗျူဟာ, ထို binary options များကုန်သည်, ထို binary options များကုန်သွယ်, fca အခွင့်အာဏာ binary options များ, fca binary options များ, fca binary options များပွဲစားများ, fca binary options များစာရင်း, fca binary options များစည်းမျဉ်း, စညျးမဉျြးစညျးကမျး binary option ကိုပွဲစား fca